Ezemidlalo | Scrolla Izindaba | Page 2
Ababhikishi babeke impilo yabo engcupheni
Scrolla Africa - 5th Jul 2022 0
Iqembu lababhikishi be-Just Stop Oil mhlawumbe libe nenhlanhla yokuthi i-Britain Grand Prix imakwe ngokubomvu ekuqaleni komjaho.
Owebhola uboshelwe izinsolo zokudlwengula
Kuboshwe umdlali webhola we-Premier League e-North London ngezinsolo zokudlwengula.
Ibhekwe ngabomvu eye-CAF Super League
UMengameli we-Confederation of African Football (CAF) uPatrice Motsepe usekuqinisekisile ukuthi imidlalo ye-CAF Super League izoqhubeka njengoba bekuhlelile ukuthi iqale ngoNcwaba.
Uhluleke ezamile umshayisibhakela wakuleli
UBrandan Mashele wakuleli ubezama ukubuyisa isicoco somhlaba se-Kickboxing kodwa ukulimala ehlombe kwenze le mpi yaba intaba angakwazanga ukuyikhuphuka.
Abaziphathanga kahle abalandeli kuhlonishwa umpetha welo mbhoxo
Ukungahloniphi ngesikhathi kukhunjulwa uPhil Bennett bekuyizinkomba zokuthi umdlalo uzongahambi ngendlela abafisa ngayo e-Loftus Versveld kusho uLucky Maree.
Unqobe indondo yokuqala ngqa
Scrolla Africa - 4th Jul 2022 0
UCarlos Sainz wethimba le-Ferrari uzuze indondo yakhe yokuqala ngqa ye-Grand Prix emqhudelwaneni omangalisayo we-Britain Grand Prix.
Abasebenzi bakhala ngokuxoshelwa ikhefu
Abasebenzi base-Wimbledon bakhala ngokuxoshwa ngemuva kokuthatha ikhefu bebukele imidlalo.
Abadlali bakhala ngokungaholelwa
Babalelwa ku-50 abadlali bebhola abakwi-Premier Soccer League (PSL) osekuphele izinyanga ezimbili bengaholi, abanye bethi abakaze bahole kusukela ngoZibandlela.
Owebhola unqamule inkontileka yakhe
Scrolla Africa - 1st Jul 2022 0
UMarting Hintergger uphoqeleke ukuthi asule ebholeni eneminyaka engu-29 ngenxa yokugxekwa ngokuhlela umqhudelwano obuzongamelwa usopolitiki wase-Germany.
Imvula iphinde yaphazamisa owamanqamu wekhilikithi
Umdlalo obuphakathi kweNgilandi nabesifazane bakuleli uphele ngokulingana ngemuva kokuphazanyiswa imvula okuholele ekutheni kudlalwe ama-overs angu-40 ngosuku lwesine.